Weather Widget ကို Galaxy S6 တွင်မည်သို့ဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ရမည်နည်း Androidsis
[APK] မည်သည့် Android တွင်မဆို Galaxy S6 weather widget ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Francisco Ruiz | | APK, Android application များ, Samsung
iOS သို့မဟုတ် Windows Mobile ကဲ့သို့သောမိုဘိုင်း operating system များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားစေသည့် Android သုံးစွဲသူများနှစ်သက်သောအရာများအနက်တစ်ခုမှာ desktop widgets များကိုဤကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည် Samsung Galaxy S6 အတွက် Fantastic Weather Widget ဖြစ်သည်။ မည်သည့် Android terminal ကိုမဆိုအခမဲ့အခမဲ့ခံစားနိုင်မည့်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက်တစ်ခုကိုဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်သင်ခန်းစာအနေဖြင့်ရှင်းပြမည်။
ပထမ ဦး စွာဒီအချက်ကိုပြောပြပါ Samsung Galaxy S6 အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက် သူငယ်ချင်းများနှင့်သီးခြားစီတီထွင်ထုတ်လုပ်သူများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် XDA developer များတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ Samsung မှနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်များ မှလွဲ၍ ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသောရာသီဥတုဝစ်ဂျက်ကိုပြီးပြည့်စုံသောမျိုးပွားမှုရရှိခဲ့သည့် developer အချို့။
1 မည်သည့် Android တွင်မဆို Samsung Galaxy S6 ၏ Weather Widget ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေလိုအပ်သနည်း။
1.1 1º - Play Store မှ XWidget ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
1.2 ဒုတိယ - Samsung Galaxy S2 အတွက် Weather Widget ကို download လုပ်ပါ
1.3 တတိယ - Samsung Galaxy S3 ၏ Weather Widget ကိုကျွန်ုပ်၏ Android terminal တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
မည်သည့် Android တွင်မဆို Samsung Galaxy S6 ၏ Weather Widget ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေလိုအပ်သနည်း။
1º - Play Store မှ XWidget ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မည့်ပထမ ဦး ဆုံးအရာသည် Google ၏ကိုယ်ပိုင် Play Store, Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သောအခမဲ့အပ်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတပ်ဆင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းသည်နာမကိုတုံ့ပြန်သည် XWidget ငါဒီလိုင်းတွေအောက်မှာငါချန်ထားသည့် link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းလိုက်သည်နှင့်၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်တော့မည်။ အခြားမည်သည့်အရာမျှမလုပ်ပဲနှင့်ထပ်မံတပ်ဆင်ခြင်း၏နောက်အဆင့်ကိုဆက်လုပ်ရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိတ်လိမ့်မည်။ Samsung Galaxy S6 အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာသီဥတုဝစ်ဂျက်.
ဒုတိယ - Samsung Galaxy S2 အတွက် Weather Widget ကို download လုပ်ပါ
Play Store မှ XWidget ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ Samsung Galaxy S6 Weather Widget ၏ compressed ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ အဲဒါကိုစပိန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရတယ်။
စပိန်လို download လုပ်ပါ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
အင်္ဂလိပ်လို download လုပ်ပါ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
တတိယ - Samsung Galaxy S3 ၏ Weather Widget ကိုကျွန်ုပ်၏ Android terminal တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်aကိုအသုံးပြုမည် android အတွက် file explorer ၎င်းသည် RAR ဖိုင်များကို decompress လုပ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ဖြစ်သည် ES ဖိုင် Explorer.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် RAR ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားသောလမ်းကြောင်းသို့သာသွားရမည်။ ၎င်းကို unzip လုပ်၍ XWidget ဖိုလ်ဒါပေါ်သည့်လမ်းကြောင်းတွင်ကူးထည့်ပါအထူးသဖိုင်တွဲအတွင်း၌ widgets။ ယင်းကိုမည်သို့အောင်မြင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအောင်မြင်သော Samsung Galaxy S6 Weather Widget ၏တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြသရန်ဤလိုင်းများအထက်ရှိဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » [APK] မည်သည့် Android တွင်မဆို Galaxy S6 weather widget ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
ဟီဆန်ကိုကို၊ ငါပြောတာက XWidget မှာပြthatနာတွေရှိနေတယ် (အသုံးပြုသူတွေကိုယ်တိုင်က Play Store မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတယ်၊ ဒါကလည်းငါ့အတွက်ဖြစ်သွားတယ်) ။ သင် install လုပ်သောဝစ်ဂျက်သည်အချိန်ကိုမှန်ကန်စွာမွမ်းမံခြင်းကြောင့်နှောင့်နှေးနေသည် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်သင်တင်လိုက်သောအရာကိုသုံးပါလိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးပေါ် XWidget update သည်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးနှင့်အာဂျင်တီးနားမှနှုတ်ခွန်းဆက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
EMILIO AYANZ ဟုသူကပြောသည်
Hello Francisco: Install လုပ်ပြီးသည်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာလာပြီ၊ အပြာအရောင်ပေါ်လာမည်မဟုတ်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ? ကူညီပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
EMILIO AYANZ သို့စာပြန်ပါ
Huawei ၏ Nexus ကိုပေါက်ကြားဓာတ်ပုံအသစ်များတွင်တွေ့ရသည်